एनआरएनमा नयाँ नेतृत्वको सय दिन... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
एनआरएनमा नयाँ नेतृत्वको सय दिन यस्ता छन् उपलब्धिहरू
हेमन्त काफ्ले सिड्नी, फागुन १
एनआरएन अध्यक्ष भवन भट्टले नेतृत्व सम्हालेको सय दिन पुरा भएको छ। दुई वर्षे कार्यकालको लागि निर्वाचित कार्यसमितिले सय दिन पुरा गर्दै गर्दा यसले के कस्तो कार्य गर्‍यो भन्ने चाख लाग्नु स्वभाविक हो।
तल्लो तहदेखि एनआरएनको अनुभव समालेर नेतृत्वमा आएको भट्टको टीमको चुनावी एजेन्डा के थियो? र यो सय दिनमा के कति योजना अगाडि बढे? भन्ने विषय यतिबेला गैर आवासीयन नेपालीबिच आम चर्चाको विषय पनि बनेको छ। वास्तवमै एनआरएनप्रति आम नेपालीको ठूलो आसा र अपेक्षा रहिरहेको बेला भवन भट्टको नेतृत्वको सय दिन कसरी बिते? भन्ने विषयमा हामीले खोतल्ने प्रयास गरेका छौं।
दिनानुदिन विस्तार हुँदै गइरहेको गैर आवासीय नेपाली अभियान र समन्वय परिषद्ले गर्नु पर्ने पदपूर्ति, विभिन्न समिति तथा टास्क फोर्सहरुको निर्माण र नेपाल स्थित सचिवालयलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनु र भवन निमार्ण र लाप्राक परियोजनालगायतका आन्तरिक कामहरुमा यो अवधिमा बढी समय खर्च भएको एनआरएन अध्यक्ष भवन भट्ट बताउछन। सय दिनको अवधिमा पूर्व कार्यकालमा अधुरो रहेका लाप्राक नमुना बस्ती, संघको सचिवालय भवन तथा संखमुल पार्क निर्माणमा संघले विशेष जोड दिएको भट्टले बताए। संघको पहिलो प्रत्यक्ष बैठकमा नै ती आयोजनाका ठेकेदार, परामर्शदातासहित सम्बन्धित पक्षलाई निम्त्याएर तीन वटै आयोजनाहरुका गतिबिधि अध्ययन गरिएको थियो। यी तीनवटै आयोजनाहरु संघका अध्यक्ष लगायत उपाध्यक्षहरुको नेतृत्वमा अघि बढिरहेका छन्।
लाप्राक नमूना वस्ती निर्माणका लागि अध्यक्ष भट्टकै पहलमा नेपाली सेनाका ५० जवान बढाउने काम भएको छ र हाल प्रयोग भैरहेका निर्माण सामग्रीहरुमा थप सुधार गर्दै कामलाई द्रूत गतिमा अघि बढाइएको छ। हालसम्म ३ सय २७ वटा घरको डिपिसि सम्मको कार्य सम्पन्न भईसकेको र ३ वटा घर पूर्ण रुपमा निर्माण भइसकेको छ र यस बाहेक अन्य निर्माण सम्बन्धी कार्यहरु नियमित रुपमा सुचारु भइरहेको छ। मौसमका कारणले काममा शिथिलता आएपनि मौसम सुधारसंगै काम पुनः सुचारु भएको छ। निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न मौसमी कठिनाइ, निर्माणस्थलको कठिन भौगोलिक अवस्था स्थानीयवासीको सहयोग र कामदारको उपलब्धता प्रमुख चुनौति छ।
भवन निर्माण कार्य तिव्र गतिमा भइरहेको छ। सकेसम्म छिटो निर्माण कार्य सम्पन्न गरी आफ्नै भवनबाट सचिवालयको कार्य सम्पादन गर्ने दिनको प्रतीक्षामा वर्तमान अन्तर्रा्ष्ट्रिय समन्वय परिषद् रहेको छ। सचिवालय भवनको संयोजन उपाध्यक्ष कुमार पन्तले गरेका छन्। पहिलो चरणको कार्य आगामी बैशाखसम्म सम्पन्न गरी सचिवालय आफ्नै भवनबाट संचालन गर्ने तयारी भैरहेको छ।
शंखमुल पार्क र बागमती किनाराको शंखमुल क्षेत्रमा संघले ३२ रोपनी जग्गामा पार्क निर्माण गरिरहेको छ। परोपकारी परियोजना अन्तर्गत निर्माण हुन लागेको यस परियोजनाको निर्माण लागत करीव २ करोड २५ लाख अनुमान गरिएको छ। संघले निर्माण गरिरहेको शंखमुल पार्कमा प्रयोग भैरहेका सामग्रीहरुको गुणस्तर कमसल देखिएकाले स्तरीय र मजबुत सामग्रीहरुको प्रयोग गरेर बनाउन संघले निर्देश गरेको छ।
शंखमुल पार्कको संयोजन उपाध्यक्ष कुल आचार्यले गरेका छन। समन्वय परिषदले नेपालका विविध जिल्लाहरु परोपकारीका कार्यहरु संचालन गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा हालै काबुलमा तालिवानको आक्रमणमा परी दिवगंत भएका ११ जना नेपालीहरुका परिवारलाई जनही १ लाखको सहयोग प्रदान गरिएको छ। सिन्धुली गढीको सम्बर्धन र प्रवर्धनको लागि त्यहाँको स्थानीय सरकार कमलामाई नगरपालिका र संघवीच सिन्धुली गढीको पुनर्निर्माणको गुरुयोजना तर्जुमा गर्ने सम्बन्धी सहमती पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। यस संघले गढीको पुनर्निर्माणको गुरुयोजना तयार पार्न मद्दत गर्ने छ।
वैदेशिक रोजगारका लागि साउदी गएर जेल परेका थानेश्वर भुषाललाई जेलमुक्त गर्न नेपाली प्रवासी समन्व समितिसंगको सहकार्यमा रु १५ लाख ५० हजारको ब्लड मनि सहयोग गरिएको छ। यसमा एनसिसि साउदी अरेवीयाले २ लाख ५० हजार र मलेसियाले ५० हजार सहयोग गरेको थियो। सडक सुरक्षाकै सन्दर्भमा नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग पनि संवाद भइरहेको छ।
पृथ्वी राजमार्गको काठमाडौं मुगलिङ सडकखन्डको सुरक्षा अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले ससाना सुधार गर्ने र सडक सुरक्षामा जागरुकता बढाउने लक्ष्य लिएको प्रवक्ता भुषण घिमिरेले बताए। सडक सुरक्षाकै सन्दर्भमा नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसंग पनि संवाद भइरहेको छ। नेपालमा लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा गैर आवासिय संघ लागि परेको छ। जसका लागि अध्यक्ष भट्टले नेपाल पावर इन्भेस्टमेन्ट समिटमा समेत आफ्नो पैरवी गरेका थिए। त्यस बाहेक लन्डमा समेत लगानीसम्वन्धी एक दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ।
त्यस बाहेक पनि संघले नेपाल पत्रकार महासंघमा इ लाइब्रेरी स्थापनाका लागि समिती बनाइ काम अगाडि बढाएको छ। यति मात्र होइन अध्यक्ष भट्ट जापानमा ब्यवशाय गर्ने भए पनि हरेक हप्ताजसो नेपाल आइ एनआरएन गतिविधीमा संलग्न हुँदै आएका छन्। दुई वर्षको कार्यकाल छोटो पनि छ र यसमा धेरै ठूला जिम्मेवारी पनि छन् त्यसैले सय दिन भनेको धेरै समय बितिसक्यो जस्तो लागेको छ, अध्यक्ष भट्टले बताए। हामीले अझ थुप्रै कामहरू गर्न बाँकी छन्, त्यसका लागि हामीले मिहिनेत गर्नु जरूरी छ, उनले सुनाए।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन १, २०७४, ०५:००:४०
किरण थापा अस्ट्रेलियाको २० औं मोर्टगेज ब्रोकर
अस्ट्रेलिया आउनेले जान्नैपर्ने केही कुरा
अस्ट्रेलियामा चाडबाडको रन्को, देउसी-भैलो आकर्षण बन्दै